ဘုန်းကျော်: နအဖ နဲ့ ဒေါ်စု သတင်းစာ၇ှင်းလင်းပွဲက ၈၇င်းနစ်စာအုပ်ထဲမှာတောင် မှတ်တမ်းတင်လို့ ၇တယ်
နအဖ နဲ့ ဒေါ်စု သတင်းစာ၇ှင်းလင်းပွဲက ၈၇င်းနစ်စာအုပ်ထဲမှာတောင် မှတ်တမ်းတင်လို့ ၇တယ်
တစ်နာ၇ီကြာ တွေ့ ဆုံ။ သတင်းစာ ၇ှင်းလင်းပွဲလုပ်။ မေးခွန်းသုံးခု မေးခွင့်၇။ ဒီနေ့ အလုပ်ထဲမှာ အဖြူတွေက ပြောတယ်။ နအဖ နဲ့ ဒေါ်စု သတင်းစာ၇ှင်းလင်းပွဲက ၈၇င်းနစ်စာအုပ်ထဲမှာတောင် မှတ်တမ်းတင်လို့ ၇တယ်တဲ့ဗျာ။ မေးခွန်းသုံးခုဆိုတော့။ အ၇င်တုန်းက တွေ့ ဆုံပွဲတွေမှာ ဒီလို သတင်းစာ၇ှင်းလင်းပွဲ မလုပ်တာတော့ အတော်ထူးခြားပါတယ်။ တစုံတ၇ာတော့ အဆင်ပြေနိုင်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ သို့ သော် တဘက်ကလည်း ဒီလို တွေးမိတယ်။ ဒါလား နအဖ ပေးတဲ့ တွေ့ ဆုံးဆွေးနွေးေ၇း။ ဒါလား ဒေါ်စုတောင်းနေတဲ့ တွေ့ ဆုံပွဲ။ ဘာတွေပြောလဲဆိုတာလည်း အသေးစိတ်မသိ၇။ ဒေါ်စုကြည့်၇တာ လက်ပိုက်ပြီးတော့ ခန့် ခန့် ကြီးနဲ့ ။ ဆ၇ာမကြီး အထာလား။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မပျော်၇ွင်တဲ့ပုံ။ ဦးအောင်ကြည်ကြည့်၇တာ အတော် ပျော်နေတဲ့ပုံ။ သူက ၈န်တူလားဗျ။ မျက်နှာက အခြောက်လို။ နေပါအုံး။ တွေ့ ဆုံလာတာက ဦးခင်ညွန့်၇ှိစဉ်ကတည်းက။ တခါမှ တခါမှ မဖြစ်။ အ၇ည်အချင်း၇ှိတဲ့ အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်ဆို၇င် အဆင်ပြေအောင် ညှိနိူင်းနိုင်၇မယ်လို့ကျနော်တော့ ယုံကြည်တယ်။ အခုတော့ တွေ့ တာပဲ အဖတ်တင်။ မီဒီယာမှာ ပါ။ ဒါလောက်ပါပဲလား အမေစု၇ယ်။ ပြည်သူတွေကတော့ ဆင်၇ဲ့ ဟိုဟာကို ခွေး မျှော်၇သလို ဖြစ်နေပြီ။ လည်ပင် ၇ှည်တာပဲ အဖတ်တင်တယ်။ အဆင်ပြေပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။ ဘယ်သူမှ သာစေနာစေမ၇ှိပဲ စုတ်ပြတ်သတ်နေတဲ့ တိုင်းပြည်နဲ့ လူထုကို ပဲ အဒိက ငဲ့ ကြပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းကနေေ၇းလို့ကပေါက်တိကပေါက်ချာဖြစ်နေပါတယ်။ မောင်ဘုန်းကျော်
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Tuesday, July 26, 2011
ဟေး ဟေး ဟေးဟေးးးးးးးး ဂုံးကျော်ရေ့ မင်းတို့သြဇီကလဲ လူသတ်သမားတွေ ပေါလှချေကလားကွ ဟေ
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အစိုးရသစ် အလုပ်သမားဝန်ကြီးတို့၏ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု အသေးစိတ်ကို ပြည်သူများထံ အသိပေး ဆွေးနွေးမှု မရှိပါက အကျိုးရလာဒ်ကောင်းများ ထွက်ပေါ်နိုင်မည် မဟုတ်ကြောင်း မွန်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များက ပြောသည်။
မွန်ဒေသ လုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီပါတီ ဥက္ကဌ နိုင်ငွေသိန်းက က “ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒ လိုအပ်ချက်တွေကို ပြည်သူတွေနဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးရင် ပြည်သူတရပ်လုံး သိအောင် ရှင်းပြ၊ အဲဒါမှ အကျိုးရှိနိုင်မှာ။ ပြည်သူတွေသိအောင် ဘာမှမရှင်းပြ ဒီအတိုင်း တိတ်ဆိတ်သွားရင်တော့ ဘာမှထူးလာမှာ မဟုတ်ဘူး”ဟု ဆိုသည်။
I agree that comment.She met Than Shwe,Mg Aye and khin Nyunt.The whole country know that but she said nothing to country.Why?
If she tell the truth,people will blame to her that why u keep on talking these lair.Waste time.Do sometime instead of talking.Dont u know that they r cheating to u?She doesent know how to do the other way.She knows only"Lets talk".
If u r cheated one time,thats not ur fault but if u cheated two time,thats ur fault.U r stupid.u r idiot.
Thats why she said nothing to country.She knows that they r cheating but she doesent know how to do the otherway.
Thats why she said nothing to country.She knows that they r cheating but she doesent know how to do the otherway.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ထောင်ထဲ က မျိုးချစ် အာဇာနည်တွေ
တဖြေးဖြေး ကြွေ လွင့်သွားတဲ့ အထိ
ူLET'S TALK လုပ်နေဦးမှာ လား ??????????
သင့်တော်မည့် ပုဂ္ဂိုလ် မရှိတော့ ပါသဖြင့်
၂၃ နှစ် ဒုက္ခပင်လယ်ဝေ ခဲ့ရကာ
သေ သူ သေ
ပျောက် သူ ပျောက်
ပြေး သူ ပြေး
တောကြောင် တသိုက် က
ကောင်း ကောင်း ကြီး သိ လို့ 
၂၃ နှစ် သင့်အား
ပျားရည်တိုက် ဝမ်းချ ခဲ့ တာတွေ
သင်၏ ခင်ပွန်း နောက်ဆုံးခရီး အပေါ်
အသင် သင်ပုန်းခြေနိုင် တာတွေကို
တယောက် အဖြစ် ပြတ်ပြတ်သားသား
ကျွန်တိုင်းပြည် ဘဝ က ကင်းလွတ်မှာပါ။
အလိမ်ခံရဖို့ခေါ်တယ်ဆိုတာသိသိကြီးနဲ့ခေါ်တိုင်းသွားတယ်။ အလိမ်ခံရပြီးပြန်ပြန်လာတယ်။ ပြန်လာတိုင်းဘာပြောတယ်ဆိုတာလူထုကိုလုံးဝမပြောဘူး။ ပြောပြရင် လူထုကအကြွေးမပေးနိုင်လို့ ခေါ်ခေါ်ပြီးလိမ်နေတာနားမလည်ဘူးလား။ ဒီလောက်ထိတုံးအ၊ဒူရသလား။ မသွားနဲ့ တခြားနည်းလမ်းရှာလို့အပြောခံရမှာစိုးလို့။
ဖြင့်အပြောင်းအလဲဖြစ်နိုင်တယ်။ အာဏာလွှဲပေးနိုင်တယ်လို့ ယုံကြည်တယ်။ ဒါကြောင့်သွားတယ်။ ဘာဖြစ်သလဲ။
ဖြေ။ ။ဂတိမတည်တဲ့လူတွေ။ လူလိမ်လူညာ ကလိမ်ကကျစ်တွေဆိုတာ လူတိုင်းသိတယ်။ သူတို့ကိုလုံးဝအယုံအကြည်မရှိလို့ရွေးကောက်ပွဲမ၀င် တာ။ အဲ့ဒါဘာဖြစ်သလဲ။
အကြိမ်ကြိမ်အလိမ်ခံရပြီးပြီ။ တခါအလိမ်ခံရရင်ကိုယ့်အပြစ်မဟုတ်ဘူး။ နှစ်ခါအလိမ်ခံရရင်တော ကိုယ်စောက်သုံးမကျလို့။ ဒီလိုပဲခေါ်တိုင်းသွားပြီးဆက်အလိမ်ခံ အုံးမှာလား။ တခြားနည်းလမ်းမရှာတက်တော့ဘူးလား။
ဒါလားလူထုခေါင်းဆောင်။ ခေါင်းဆောင်ဆိုတာ brain ရှိရတယ်။ လူထုနှင့်တိုင်းပြည်ကိုအားနာပါအုံး။
နအဖ နဲ့ ဒေါ်စု သတင်းစာ၇ှင်းလင်းပွဲက ၈၇င်းနစ်စာအုပ်...